कसरी गर्ने प्लास्टिक घर भित्र गोलभेंडा खेती ?
११ फाल्गुण २०७५ शनिबार/ ०८:२७
वीउ उत्पादन प्रविधिबारे पूर्ण जानकारी
काठमाडौं । नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्, कृषि अनुसन्धान केन्द्र (वागवानी), पोखराले तयार पारेको प्लास्टिक घर भित्र गोलभेंडा खेती र गोलभेंडाको वर्णशंकर वीउ उत्पादन प्रविधिबारे सम्पूर्ण जानकारी बारे हलोखबर डट कममा व्याख्या गर्ने प्रयास गरिएको छ ।
राजधानीमाथिको आकासबाट हेर्ने हो भने उपत्यकाका अधिकांस खाली ठाउँमा टनेलहरु थुप्रै ठाउँमा देखिन्छ । यस्ता टनेलहरुको अवस्था के छ ? फाईदामा छन् वा छैनन्, त्यो दोश्रो पाटो हो । तर, किसानले गर्न खोजेको पेशामा कति दक्ष छन् यसले पनि भविष्यको निर्धारन हुन्छ । सरकारी सहयोगको पाटो त छदैछ ।
यहीक्रममा यस समाचारमा प्लास्टिक घरभित्र गोलभेडा खेती र गोलभेडाको वर्णशंकर बीउ उत्पादनबारे पूर्ण जानकार दिनेप्रयास गरिएको छ ।
तलको लिंक खोल्नुहोला ।